7 Talooyin Si Aad Uga Fogaato Jeebka Yurub | Save A tareenka
Guriga > Talooyin ku Socda > 7 Talooyin Si Aad Uga Fogaato Jeebka Yurub
Magaalooyinka qadiimiga ah ee jaceylka, jardiinooyin soo jiidasho leh, fagaarayaal qurux badan, malaayiin dalxiisayaal ah u soo jiita Yurub maalin kasta. Socotada ka kala yimid adduunka oo dhan waxay booqdaan Yurub si ay u sahamiyaan taariikhdeeda iyo soojiidashadeeda oo ay u arkaan in ay jeebka ku shubteen khiyaanooyin caqli badan oo ku yaal meelaha caanka ah ee Yurub. Badbaadada inta lagu jiro safarkaaga yaabka leh adiga oo raacaya talooyinkan si aad uga fogaato jeeb-qaatayaasha Yurub.
1. Talooyin Si Aad Uga Fogato Jeebka: Ogow Aagagga Khatarta ah
Ogaanshaha halka aad u socotaa waxay qayb weyn ka qaadataa inaad hesho waqtiga ugu fiican noloshaada. Sidaas, markaad qorsheynayso fasaxaaga Talyaaniga ama Faransiiska, waa inaad baartaa meelaha la arki karo iyo sidoo kale meelaha halista ah. Ma jirto sabab loo walwalo, isku arki maysid dagaal kooxeed, laakiin meel kasta oo la tago waxay leedahay meelo xasaasi ah, halkaas oo dalxiisayaashu u baahan yihiin inay si gaar ah u fiirsadaan alaabtooda oo ay iska ilaaliyaan jeeb-qaatayaasha.
Guud ahaan, meelaha ay tahay inaad ka taxadarto, waa meelo sida suuqyada boodada, mashquulsan fagaarayaasha caanka ah, iyo gaadiidka dadweynaha dhibco. Waxa ay meelahaas oo dhan wadaagaan waa in ay aad u dad badan yihiin, markaa intaad eegayso Eiffel Tower ama Milan Cathedral, jeebabka ayaa si fudud kuugu soo geli kara, ilbidhiqsiyo gudahoodna jeebkaagu waa kaa dhammaaday. Inaad ka warqabto agagaarkaaga iyo dadka badan ayaa ah tilmaanta ugu sarreysa si looga fogaado kuwa jeebka jeexa ee Yurub.
2. Cilmi -baarista Tabaha Dhabarka iyo Fadeexadaha
Qariibka quruxda badan ama khiyaanada ku soo fool leh waa 2 ee khiyaamada jeeb -jeebka ee ugu badan Yurub. Sida magaalo kasta oo Yurub ku taal ay u leedahay sixir iyo astaamo yaab leh, la mid ah xeeladaha jeebka jeebka lagu yaqaan. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad haysato alaabtaada qaaliga ah, Horey u sii baadhi khayaanada jeebka-qaadista ee caadiga ah ee meeshaad u socoto.
Tusaalooyinka dheeraadka ah ee khiyaamada jeebabka ayaa ah shisheeyaha quruxda badan oo weydiinaya waqti ama tilmaamo. Intaad hubinayso khariidadaada, ama daawo, way soo dhowaadaan oo waxay qabsadaan wax kasta oo ku jira jeebabkaaga ama boorsadaada. Sidaas, ka digtoonow oo ha ku dhicin mid ka mid ah 12 khiyaanooyinka waaweyn ee safarka adduunka.
Brussels U Socda London Tareen
3. Talooyin Si Aad Uga Fogato Jeebka: Hoteelka Ka Tag Qiimaha Qiimaha Leh
Ka tagista baasaboorka, kaararka deynta, iyo dahabka huteelka ammaankiisu waa mid ka mid ah talooyinka ugu sarreeya si looga fogaado jeebabka jeebka ee Yurub. Sida ku xusan ka hor, jeebabka jeebka ayaa leh karti ay ku ogaadaan sida saxda ah ee laga helo alaabta qaaliga ah iyadoon dalxiisayaashu weligood ogaan. Waxaa intaa dheer, maanta marka aad koobi baasaboorkaaga ku haysan karto emaylkaaga ama taleefankaaga, ama buug tigidhada dalxiiska onlaynka ah, ma jirto sabab aad u wadato dhammaan kaadhadhkaaga lacagta caddaanka ah ama credit card.
Sidaas, ka hor intaadan bixin si aad ugu dhex wareegto mid ka mid ah suuqyada boodada ugu fiican Yurub, qaado xoogaa lacag caddaan ah. Sidoo kale ma jirto sabab loo qaado dhammaan kaararkaaga deynta, laakiin hadaad ku adkaysato, ku faafi lacag caddaan ah iyo kaadhadhka jeebadaha gudaha ee kala duwan ama suumanka lacagta.
4. Ku hay Qiimaha Muhiimka ah Jeebka Gudaha
Suumanka lacagta ee maalmaha xagaaga ama jeebabka jaakadaha gudaha ayaa ah hab wanaagsan oo lagu xafido alaabtaada qiimaha leh. Khiyaamadan socdaalka ah way fududahay in la sameeyo markaad xirato lakabyo, inta lagu jiro dayrta ama jiilaalka waxaana laga yaabaa inaanay raaxo lahayn marka cimiladu diirran tahay oo qoyan tahay.
Waxaad ka iibsan kartaa suumanka lacagta safar kasta ama dukaanka xusuusta guriga ama inta safarka lagu jiro, tusaale ahaan saldhigyada tareenka ee dhexe ama garoomada diyaaradaha. Faa'iidada ah in wax lagu hayo jeebabka gudaha waa wax iska cad, kuwa qafaalayaasha ah ayaa kugu soo dhici kara, laakiin waligeed ma maamuli doonto inay gaadho meel ka baxsan jeebkaaga jiiniska. Sidan, waxaad si farxad leh u sii wadi kartaa warwareega hareeraha iyo sahaminta astaamaha cajiibka ah ee Yurub.
5. Soo qaado Boorso Jidh-dhaaf ah, Ma aha boorsada dhabarka
Markaad dhex mushaaxayso luuqyada Yurub ee soo jiidashada leh, ama adigoo safka u taagan Louvre waa inaad ku raaxaysataa. Xirashada kabo raaxo leh ayaa lama huraan u ah inaad haysato boorso jidh leh markaad safrayso. Boorsada jidh-dhiska micnaheedu waa socdaal aan walwal lahayn, maadaama aadan u baahnayn inaad sii eegto garabka si aad u aragto haddii qof kugu dul heehaabayo safafka cidhiidhiga ah.
Waxaa intaa dheer, kaliya waxaad ka qaadan kartaa dhalada biyaha ama boorsada bacda jirka. Sidaas, in la keeno boorso jidh-dhaaf ah ayaa ku habboon in laga fogaado qaadashada jeebka ee Yurub, iyo sidoo kale dalxiis si fudud oo raaxo leh.
6. Talooyin Si Aad Uga Fogato Jeebka: U lebbis oo U Dhaqmo Sida Degaanka
Mid ka mid ah waxyaabaha dalxiis u siiya khabiirada khabiirka ah waa moodada dalxiiska oo aad u gaar ah: boorsooyin, xirashada isboortiga, oo u dhaqma sida dalxiis. Kaniisadaha, fagaarayaasha qadiimiga ah, iyo qaar badan oo ka mid ah astaamaha Yurub ayaa aad u soo jiidasho leh in dalxiisayaashu inta badan istaagaan oo si fudud u fiiriyaan, ama boqolaal sawir qaado.
Talada ugu fiican ee looga fogaado qaadashada jeebka -jeebka ee Yurub waa in la dhexgalo dadka maxalliga ah. Sidaa darteed, sidaad hore uga sii fiiriso meelaha ugu fiican ee aad ku booqan karto meesha aad u socoto, hubi isbeddellada deegaanka iyo dhaqanka.
7. Talooyin Si Aad Uga Fogato Jeebka: Hayso Caymiska Safarka
Helitaanka caymiska safarka ka hor safarka waa lama huraan. Maanta waxaad sidoo kale caymis kartaa alaabtaada qaaliga ah iyo boorsooyinkaaga, kaliya haddii ay lunto ama kiiskan, la xaday. Caymiska safarka wuxuu noqon karaa badbaadiye nololeed haddii boorsadaada iyo kaararkaaga la xado, dal shisheeye oo aysan jirin cid u gurmata.
Gebogebadii, socdaalku waa hab fiican oo lagu baadho dhaqamada, waddammada oo ogaada aragtiyo yaab leh. Inta badan waaya -aragnimada safarku waa wax la yaab leh oo aad bay u yar tahay in dalxiisayaashu la kulmaan jeeb -jeebka Yurub. Si kastaba ha ahaatee, waxaa had iyo jeer fiican inaad u diyaar garowdo oo taxaddar muujiso, sida raacitaanka talooyinkeena ku saabsan sida looga fogaado qaadashada jeebka ee Yurub.
halkan at Save A tareenka, Waan ku farxi doonaa inaan kaa caawino inaad qorshayso fasax badbaado leh oo aan la ilaawi karin meel kasta oo Yurub ah oo tareen ah.
Miyaad rabtaa inaad ku dhejiso dhejiskayaga baloogga "Talooyin Si Aad Uga Fogaato Jeebka Jeebka Yurub" bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/tips-avoid-pickpockets-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Ka fogow-qaadista	Yurubtraveltips	Jeebabka	khayaanada	safarrada